साथीहरूसँग घडी 42
भौतिक शरीर वा मानव निकायमा अन्य प्रक्रियाहरूसँग साताका दिनमा विभाजनमा समय, महिना, हप्ता, दिन, घण्टा, घण्टा र सेकेण्डमा समय छ? यदि त्यसो भए, के के संवादहरू के हुन्?
सूर्य, चन्द्र र ग्रहहरूको चक्र र मानव शरीरमा केहि शारीरिक क्रियाकलापहरू द्वारा समयको प्राकृतिक उपायहरू बीच एक सटीक पत्राचार छ, तर मानवको यांत्रिक विरोधाभासहरूले गरेको विभाजन ठीक छैन।
समग्र ब्रह्माण्डले आकाश वा अन्तरिक्षको देख्न वा बुझ्न सकिने सबैद्वारा प्रतिनिधित्व गर्दछ; यो ब्रह्माण्ड मानिसको शारीरिक शरीर अनुरूप छ; स्टार क्लस्टरहरू, उदाहरण को लागी, शरीर मा तंत्रिका र ganglia अनुरूप। सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, र ताराहरू ग्रहहरू भनिन्छ तिनीहरूका सम्बन्धित उपग्रह वा चन्द्रमाहरू, उनीहरूको वातावरणमा सारिन्छ।
समयलाई "ब्रह्माण्डमा घटनाक्रमको उत्तराधिकार" को रूपमा बोल्नु वा मान्नु भनेको अन्तरिक्षमा स्वर्गीय निकाय कहलाइने आन्दोलनबाट चिह्नित, र यसैले पृथ्वीको सम्बन्धमा उत्पन्न हुने परिवर्तनहरू र यी घटनाहरूको बीचमा पत्राचार छ घटना र सामान्य मानव शरीर यसको शारीरिक प्रक्रियाहरु र परिवर्तन र परिणामहरु द्वारा त्यसबाट उत्पन्न। तर हाम्रो सुरक्षाको लागि यो राम्रो छैन कि हामी यी चीजहरू फेला पार्छौं; नत्र हामी पाण्डोरा बक्स खोल्न सक्छौं।
यो जान्न महत्त्वपूर्ण र पर्याप्त छ कि मानव शरीरमा दुई जीवाणुहरू छन् जुन सूर्य र चन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्दछन् र यसको अनुरूप छन्। शरीरमा उत्पादन प्रणाली अनुरूप छ र सौर प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। तर सौर्यमण्डलमा प्रत्येक अ्गको शरीरमा यसको सम्बन्धित अंगहरू हुन्छन्। उत्पादन प्रणालीमा बीउ र माटो सूर्य र चन्द्रमा अनुरूप शरीरमा अ organs्गहरूको कार्यको परिणाम हो। सार वा अर्कको कार्यबाट उत्पन्न हुने अर्कहरू, ग्रहहरूसँग सम्बन्धित र सम्बन्धित, शरीरको विभिन्न प्रणालीहरू मार्फत उनीहरूको काम गर्दछन्, र सबै सँगसँगै शरीरको सामान्य अर्थव्यवस्थामा यसको प्राकृतिक जीवनको अवधिको लागि काम गर्दछन्, ताकि शरीरको जीवन समर्पित विशेष काम गर्न सकिन्छ।
शरीरमा एक सिद्धान्त रहेको छ जुन सूर्यको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो तल र माथि वा शरीर वरिपरि जान्छ, सूर्य को राशिफल को बाह्र संकेतहरु मार्फत एक पूरा सर्कल बनाउन भनिन्छ। मानव टाउको अनुरूप साइन मेरीबाट, साइन क्यान्सरको रास्ताबाट, स्तन वा छातीसँग मिल्दोजुल्दो साइन लाइब्रेरीमा, सेक्सको स्थान (अंगहरू होइन) अनुरूप, र साइन मकरको मार्गबाट, मुटुको क्षेत्रको मेरुदण्डसँग मिल्दोजुल्दो छ र फेरि टाउकोमा मेष पुर्‍याउँछ, एक वर्षको एक सौर यात्राको समयमा राशिको चिह्नहरूको माध्यमबाट शरीरको कीटाणु वा सूर्य पार गर्दछ। शरीरमा चन्द्रमाको अर्को कीटाणु प्रतिनिधि छ। चंद्र जीवाणु यसको राशि चक्रका सबै संकेतहरू मार्फत जानु पर्छ। यद्यपि यस्तो अवस्था सामान्यतया हुँदैन। चन्द्रमाको जगत ब्रह्माण्डको राशि होइन। चन्द्रमाले २ and र अंश दिनहरूमा शरीरमा आफ्नो राशिको माध्यमबाट क्रान्ति ल्याउँदछ, चंद्र महिनाको अनुरूप। जब चन्द्रमा पूर्ण हुन्छ यो यसको राशिफलको मेष राशिमा हुन्छ र शरीरमा यसको सम्बन्धित कीटाणु टाउकोमा हुनुपर्दछ; अन्तिम क्वाटरमा यसको राशि र शरीरको स्तनको क्यान्सर हो; चन्द्रमाको अन्धकार नयाँ चन्द्रमातिर मोड्न यसको राशिफलको पुस्तकालय हो र शरीरमा यसको कीटाणु यौनको क्षेत्रमा हुन्छ। चन्द्रमाको पहिलो चौथाईमा यो मकरमा छ र शारीरिक जीवाणु मुटुको बिरूवा मेरुदण्डको हड्डीको साथ हुनुपर्दछ, र त्यहाँबाट शरीरको कीटाणु टाउको माथि माथि जान्छ, जब चन्द्रमाले आफ्नो मेषमा भरिएको हुन्छ। । त्यसैले सौर वर्ष र चन्द्र महिना शरीरमा आफ्ना प्रतिनिधि कीटाणुहरू पार गर्दै शरीरमा चिह्नित हुन्छन्।
सायद कुनै पनि मानव पात्रोमा समयको सब भन्दा पुरानो उपाय हो। यो सबै भन्दा पुरानो व्यक्तिको पात्रोमा रेकर्ड गरिएको छ। आधुनिक व्यक्तिहरू, आवश्यक रूपमा, तिनीहरू तिनीहरूबाट orrowण लिएको छ। हप्ताको प्रत्येक दिन सूर्य, चन्द्रमा, र ग्रहहरूसँग सम्बन्धित छ, जहाँबाट दिनहरू तिनीहरूको नाम लिन्छन्। मानव शरीरको जीवन सौर प्रणालीको एक अभिव्यक्तिसँग मेल खान्छ। मानव शरीर मा हप्ता एक समान मा सानो मा मेल खान्छ।
त्यो दिन, जुन एक पटक आफ्नो अक्षको वरिपरि पृथ्वीको क्रान्ति हो, हप्ताको सात कालहरूमा एक हो, र त्यसमा ठूलो अवधि फेरि प्रतिनिधित्व गर्दछ। मानव शरीरमा, पृथ्वीसँग मिल्ने कीटाणु वा सिद्धान्तले यसको विशेष प्रणाली मार्फत सम्पूर्ण गोल गर्दछ, जुन पृथ्वीको क्रान्तिसँग मिल्दोजुल्दो छ। यी पत्राचारहरू, सौर वर्ष र महिना, चंद्र महिना, हप्ता, दिन मानिसको शरीरको शारीरिक शल्यक्रियाको साथ, दिनको साथ समाप्त हुन्छ। "ब्रह्माण्डमा घटनाक्रमको उत्तराधिकार" का अरु धेरै साना उपायहरु छन् जुन मानव शरीरमा पदार्थ र प्रक्रियाहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। तर घण्टा, मिनेट र सेकेन्डका लागि मात्र विश्वव्यापी र शारीरिक सम्बन्धको बीचमा एक प्रकारको समानता दाबी गर्न सकिन्छ विश्वव्यापी र शारीरिक घटनाहरूका बीच एक सादृश्य समानता। घण्टा, मिनेट र सेकेन्ड तुलनात्मक रूपमा आधुनिक उपाय हुन सक्छ। जब दोस्रो भन्ने उपाय अपनाईयो यो विचार गरियो कि यो यति छोटो अवधि भएकोले यसलाई विभाजन गर्न कुनै प्रयासको आवश्यक पर्दैन। शारीरिक विज्ञानले उही गल्ती गरे जब तिनीहरूले परमाणुको नाम दिए जुन मिनीमेट पार्टलाई उनीहरूले आदिम तत्वहरू ठानेका थिए। पछि तिनीहरूले ती "परमाणुहरू" लाई आफैंमा एक सानो ब्रह्माण्डको रूपमा पत्ता लगाए, जसको भागलाई इलेक्ट्रोन, आयन भनिन्थ्यो, यद्यपि आयोन त्यस्तो अन्तिम विभाजन होइन। मानव शरीर को नियमित छ र ब्रह्माण्ड मा घटना को अनुरूप काम गर्नु पर्छ, तर सधैं शरीर को प्राकृतिक प्रक्रियाहरु र सामान्य कार्यहरु मा हस्तक्षेप। त्यसपछि ऊ समस्यामा पर्छ। पीडा, पीडित र रोग यसको परिणाम हो, जुन प्रकृतिको प्रयासमा शरीरको प्राकृतिक प्रक्रियाहरू हुन् जुन सामान्य अवस्थालाई पुनःस्थापना गर्दछ। मानव शरीरमा यी प्रक्रियाहरू द्वन्द्व र प्रकृतिमा cateclysms संग एक पत्राचार गर्न को लागि तिनीहरूको पत्राचार छ। यदि मानव शरीरमा काम गर्छ र प्रकृति बिरूद्ध धेरै काम गर्दैन भने उसले शरीरको प्रत्येक अ and्ग र ब्रह्माण्डमा उस्तै भाग र तिनीहरूको पारस्परिक प्रक्रियाहरू बीचको सच्चा पत्राचार सिक्न सक्छ।